မြန်မာပြည်မှာ တပ်မတော်ကအာဏာသိမ်းပြီး ၁၆ရက် မြောက်နေ့ မြင်ကွင်း ... - MoeMaKa Media
Home / Coup / Currents / Maung Yit / Opinion / မြန်မာပြည်မှာ တပ်မတော်ကအာဏာသိမ်းပြီး ၁၆ရက် မြောက်နေ့ မြင်ကွင်း ...
မြန်မာပြည်မှာ တပ်မတော်ကအာဏာသိမ်းပြီး ၁၆ရက် မြောက်နေ့ မြင်ကွင်း ...
Coup, Currents, Maung Yit, Opinion
Myanmar's military spokesman General Zaw Min Tun attendsanews conference in Naypyitaw, Myanmar, February 16, 2021. /Reuters
(မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၂၁
ယနေ့ကတော့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ မနက်ခင်း ဖြစ်တယ်။ မနေ့က မြင်ကွင်းကို မပျက်မကွက်ရေးဖို့အတွက် တရက်နောက်ကျသွားပါတယ်။
တပြည်လုံးအနှံ့မှာ ဆန္ဒပြပွဲနဲ့ ဝန်ထမ်းသပိတ်တွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ လူအင်အားနည်းလာတယ် ပြောပေမယ့် တက်ကြွမှုနဲ့ ခွန်အားကတော့ တိုးပြီးရင်း တိုးပါပဲ။ စည်ပင်သာယာဝန်ထမ်းတွေ သပိတ်မှောက်စစ်ကြောင်းထဲ ပူးပေါင်းကြပါတယ်။ ပြည်ပက မြန်မာသံရုံးဝန်ထမ်းတွေကလည်း CDM ဝန်ထမ်းသပိတ်မှောက်ထားကြောင်း လက်ဆင့်ကမ်း ထုတ်ပြန်ထားကြတယ်။
စစ်အာဏာသိမ်းကောင်စီက ပထမဆုံးအကြိမ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပတယ်။ တက်ရောက်သူဦးရေ အလွန်နည်းပြီး သတင်းဌာနများနဲ့ သံတမန်ရပ်ကွက်က မတက်ကြသူတွေ များတယ် ဆိုပါတယ်။ စစ်အစိုးရအားပေးထောက်ခံသူတွေက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ အားပေးစကားတွေ ပြောဆိုကြပေမယ့် နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနက သတင်းထောက်တွေက စစ်အစိုးရကို မေးခွန်းတွေ ထိထိရောက်ရောက် မေးကြပါတယ်။ စစ်အုပ်စုက သူတို့နောကျေနေတဲ့ အခြေခံဥပဒေ ၂၀၀၈ ထဲက ဟိုအချက် ဒီအချက်တွေ ဟိုထုတ် သည်ထုတ်နဲ့ ခုခံသွားပါတယ်။ အင်န်အယ်ဒီခေါင်းဆောင်တွေကို ဖမ်းဆီးထားတာကနေ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ် အရေးယူမယ်လို့ ထပ်ပြောပါတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မီတီဝင်တွေကို ၅၀၅ ပုဒ်မနဲ့ စွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်။ လူထုကိုလည်း သူတို့ဥပဒေတွေနဲ့အညီ အရေးယူမယ်လို့ အတည်ထပ်ပြုပြောကြားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မီဒီယာတွေအတွက်ကလည်း ဆက်ပြီး လွတ်လပ်စွာ သတင်းပို့ခွင့် နဲ့ တဦးချင်းအသက်ဘေး အာမခံချက်တွေ တခုမှ ထုတ်ပြောသွားခြင်း မရှိပါဘူး။ သူတို့က ပြည်သူနဲ့ မီဒီယာကိုပါ တသားတည်း နှီမ်နင်း အရေးယူမယ်သဘော အချက်ပြလိုက်တာပါပဲ။
အနှစ်ချုပ်ကတော့ သူတို့စစ်အုပ်စုက ပြည်သူလူထုနဲ့ နိုင်ငံတကာကို ရွေးကောက်ပွဲနောက်တခု ဆိုတဲ့ ထွက်ပေါက်ကလွဲပြီး ဘာမှ မပေးထားပါဘူး။ အဲသည် နောက်ရွေးကောက်ပွဲကနေ စေ့စပ်အဖြေရှာဖို့သာ သူတို့က လမ်းဖွင့်ထားပါတယ်။ ပြည်သူတွေဘက်ကတော့ စစ်အုပ်စုနဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ် အလုံးစုံ ဖျက်သိမ်းနိုင်ရေးလုပ်မလား၊ မလုပ်နိုင်ရင်တော့ သူတို့ အခြေခံဥပဒေနဲ့ သူတို့ရွေးကောက်ပွဲတွေအောက် ခေါင်းငုံ့ဝင်ကြဖို့သာ ရှိပါတော့တယ်။
နက်ဖြန် (ဒီနေ့ ဖေ ၁၇) မှာ ဒေါ်စုလွတ်မြောက်ရေး ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လူတွေ သန်းချီ လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြဖို့ လူထုက တန်ပြန်စိန်ခေါ်ထားပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ သတင်းဌာန အင်တာဗျုး (NPR USA) သဘောကတော့ - ဒေါ်စုနဲ့ အားလုံးအထိန်းသိမ်းခံများ လွတ်မြောက်ရေး၊ တနိုင်ငံလုံး တိုင်းရင်းသားတွေ အပါအဝင် လုံး၀စစ်အာဏာရှင်မှ လွတ်မြောက်ရေး ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေဟာ စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်က ဘယ်ဥပဒေအောက်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ် ရွေးကောက်ပွဲကနေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်တုန်းကမှ မလွတ်လပ်ခဲ့ပါဘူး။ ပြည်မက မြန်မာတွေ တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံး ဒီအချိန်မှာ အတူတူ လက်တွဲကြဖို့ လိုနေပြီလို့ ပြောသွားကြပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ တပ်မတော်ကအာဏာသိမ်းပြီး ၁၆ရက် မြောက်နေ့ မြင်ကွင်း ... Reviewed by MoeMaKa on 7:34 AM Rating: 5